Ukutya kwiplanethi, yintoni kwaye uyilandela njani? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukutya okutsha okuthembisa ukulwa nendlala el mundo, Inkunkuma kunye nokondla inani elikhulayo lehlabathi ngendlela esempilweni kwaye elungeleleneyo. Esi sisidlo seplanethi okanye, njengoko kusaziwa njalo, ukutya kwempilo yeplanethi.
Ngokuyintloko, ukutya kwiplanethi kuneemifuno, imifuno, iziqhamo kunye neenkozo. Hayi, inyama kunye neemveliso zobisi azikhutshelwa ngaphandle ngokupheleleyo. Kodwa kufuneka zityiwe kwinqanaba elincinci kakhulu.
1 Indlela ukutya kwiplanethi kusebenza ngayo
2 Izibonelelo zokutya kwiplanethi
2.1 Ukuphucula impilo
2.2 Imeko-bume iyayixabisa
3 Ngaba kukho ukutya okungavumelekanga ekutyeni?
4 Ngaba ukutya kwiplanethi kuyanceda ukunciphisa umzimba?
4.1 Imenyu ephakanyisiweyo
Indlela ukutya kwiplanethi kusebenza ngayo
Imifuno kunye neziqhamo zixhaphakile ekudleni kwaye kufuneka zenze ipesenti enkulu yokutya. Ngobungakanani obuncinci, ukutya kwemvelaphi yezilwanyana. Kuyacetyiswa ukuba umntu otya inyama yonke imihla, aqale ukutya olu hlobo lokutya kube kanye ngeveki kunye nenxalenye encinci.
Nangona kunjalo, inyama emhlophe (intlanzi kunye neenkukhu) inokutyiwa amatyeli aliqela ngeveki.
Ukusetyenziswa okuphezulu kakhulu kufuneka kube ngamantongomane kunye nemidumba (iimbotyi, iichickpeas kunye neelentile). Ingcebiso kukuba ukutya kwayo kube yimihla ngemihla kunye nobungakanani obulungileyo.
Izibonelelo zokutya kwiplanethi
Ngokukhuthaza ukutya okucocekileyo, ukutya ngokungathandabuzekiyo kuluncedo kakhulu kwimpilo yomzimba. Ukutya ubukhulu becala kukutya kwendalo sisipho sokwenyani kwimpilo yomzimba.
Ukusebenza okungcono kwenkqubo yokwetyisa
Ukuphuculwa kwenkqubo yomzimba yokuzikhusela
Umngcipheko omncinci wokungondleki
Ukuphulukana okunokwenzeka kwamafutha kunye nobunzima bomzimba
Ukutya okwaneleyo iivithamini kunye neeminerals
Ukulandela oku kutya kunezibonelelo ezininzi zomzimba wethu. Ukongeza, ayinakuphikwa ukuba iluncedo kakhulu kwindalo esingqongileyo. Ukongeza, ukugcina oku kutya kunceda ukukhuthaza inkunkuma encinci yokutya kwihlabathi liphela.
Ukuveliswa kokutya okwangoku kunefuthe elibi kwiplanethi ngeendlela ezininzi, ezinje ngoku: ukukhutshwa kweegesi ezandisa isiphumo sokufudumeza komhlaba kunye nokufudumala komhlaba, ukusetyenziswa kakhulu kwamanzi, ukugawulwa kwamahlathi, ungcoliseko kunye nokuphela kweentlobo.
Ngaba kukho ukutya okungavumelekanga ekutyeni?
Ekuqaleni, hayi, njengoko ukutya kufuna ukukhuthaza utshintsho kwindlela yokuphila, kodwa hayi ukuvalwa kokutya.
Ukongeza, ukutya kwiplanethi kufuna ukuhlonipha ubuntu bomntu ngamnye. Umzekelo, kuya kufuneka uhlengahlengise kwimeko yeembaleki.
Ngaba ukutya kwiplanethi kuyanceda ukunciphisa umzimba?
Ukwehla kwesisindo asiyonjongo iphambili yokutya ekuthethwa ngako. Nangona kunjalo, ngenxa yomgangatho ophezulu wesondlo, ukwehla kobunzima kunokuba "sisiphumo esibi" sokutya.
Iitapile ukukhetha + Papaya + Oatmeal + Iqanda elibilisiweyo
Imifuno eluhlaza (ingcebiso: i-broccoli kunye nesipinatshi) + iQuinoa
+ I-Strawberry (idizethi)
I-avovoc + Oatmeal + Amandongomane onokukhetha kuwo
UJiló + Ikhaphetshu + Iminqathe okanye nayiphi na enye imifuno oyikhethileyo + Irayisi emdaka + ii-ertyisi kwipod + Meat (emhlophe okanye enkomeni) + eorenji (iswekile)
Okokugqibela, uyazi indlela yokutya kakuhle kwaye ugcine umhlaba ngaxeshanye. Ewe, ngoku kunokwenzeka.